Ngosipụta ziri ezi nke uru nrụgide gas tank compressor ikuku dị mma iji lelee ma mezie iji gboo mkpa ọrụ dị iche iche.
Ọ bụrụ na enwere ike mberede na ojiji, biko jikwaa bọtịnụ mgbali na steeti mechiri emechi.
Valve nchekwa nwere ezigbo akara ga-apụta ozugbo mgbe nrụgide valvụ nchekwa dị oke elu iji hụ na nchekwa
Efere ọkọlọtọ nchara, ike siri ike, ike dị elu na ịdịte aka, enweghị mgbapụta ikuku na nchekwa.
Nkịtị akpụkpọ anụ na-emegide na ujo-ab-sorbing roller nwere ogologo ọrụ ndụ, ọ dịkwa mfe ịrụ ọrụ na ịkwaga.
Comp Igwe mkpuchi ikuku na-ebugharị eriri;
P Ngwongwo ikuku ikuku na -adịgide adịgide;
Pistin aluminom na mgbanaka piston dị elu maka itinye ihe dị elu;
Valve Valve drain dị mfe imeghe;
● Mgbanwe nrụgide na ntọala mgbubi mgbubi/mbepụ;
● Buru aka maka ịkwagharị dị mfe;
Tank tank mkpuchi mkpuchi ntụ ntụ;
Onye nche igwe maka ichebe eriri na wiil;
● Ọsọ dị ala, ogologo ndụ na mkpọtụ dị ala;
● Asambodo CE dị;
● Kwesịrị ekwesị maka ngwa ụlọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Nlereanya Ike Ihe nkiri Ọsọ Nnyefe ikuku Nrụgide Tank NW Akụkụ
HP KW Dia (mm)*Mba. RPM L/min Ogwe L KG MM
BDL-1051-30 0.8 0,55 Φ51*1 1050 72 8 30 42 750x370x610
BDW3065-150 4 3 Φ65*3 980 360 8 150 l 112 1300x420x890
BDW-3120-500 15 11 120*3 800 2170 8 500 433 Mkpebi 1820x650x1400
BDL-1105-160 5.5 4 105*1+Φ55*1 800 630 12.5 160 187 1550x620x1100
BDV-2105-300 10 7.5 105*2+Φ55*2 750 1153 12.5 300 340 1630x630x1160
BDV-2105-500 10 7.5 105*2+Φ55*2 750 1153 12.5 500 395 1820x610x1290
Nke gara aga: 2inch ruo 8inch Submersible Water Pump for Deep Deep
Osote: Ụdị BMdị 2HP/24L & 50L Compressor Air Direct-Driven na asambodo CE/UL